Tafaporitsaka ny namany efa-dahy: jiolahy mpamaky trano iray matin’ny fitsaram-bahoaka | NewsMada
Maty tsy tra-drano ny iray tamin’ireo jiolahy dimy tompon’antoka tamin’ny fikasana hangalatra tao amina tokantrano iray ao Antanandava Toamasina, ny alahady alina. Tafaporitsaka kosa ny naman’ity jiolahy matin’ny fitsaram-bahoaka ity…
Nandriaka ny ra! Nitrangana halatra sy vaky trano indray tao Antanandava Toamasina, ny alahady alina teo. Jiolahy miisa dimy indray niditra an-keriny tao an-tokotanin’olona iray ao amin’io fokontany io. Niezaka nifampiantso moramora ireo mpifanolo-bodirindrina amin’ny ahafahana misambotra ireo jiolahy. Raikitra ny antsoantso sy ny fitsofana kiririoka ka nanao tari-dositra avy hatrany ireo mpanafika na efa nandrahona ireo fokonolona tamin’ny alalan’ny antsibe aza ry zalahy. Tsy nihemotra anefa ireo fokonolona manoloana ny fitaovam-piadiana teny am-pelatanan’ireto olon-dratsy ireto. Vokany, tratran’ny fokonolona ny iray amin’ireo jiolahy ary tsy namelan’ireo andian’olona marobe fa samy nidaroka sy nanala ny fony teo ny rehetra ary tsy nifarana izany raha tsy tapitra ny ain’ity jiolahy ity. Tafaporitsaka kosa ireo jiolahy efatra naman’ity jiolahy matin’ny fitsaram-bahoaka ity.
Tsy laitra iainana ny tsy fandriampahalemana ao Toamasina…
Tafiditra ho isan’ny faritra mena amin’ny tsy fandriampahalemana ny ao an-drenivohitry ny faritra Atsinanana, amin’izao fotoana izao, na eo aza ny ezaka ataon’ny zandary sy ny polisy amin’ny famongorana ireo andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana mahery vaika. Manoloana izany, leon’ny afitsoky ny tsy fandriampahalemana miseholany any an-toerana ny mponina ka mitondra faisana avy hatrany izay tratran’izy ireo. Fitsaram-bahoaka avy hatrany ny miandry ireo tratra na enjehin’ny lalàna aza ny fanaovana fitsaram-bahoaka toy izao. Tsy matoky ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana intsony ny olona? Raha hiverenana ny zava-misy ao Toamasina, indrindra ny ao amin’ny fokontany Mangarano I sy Mangarano II, Andranomadio, Morarano, Ambalankisoa, Antsiranampasika ary Mangarivotra Atsimo sy Avaratra hatrany Antanandava, tsy laitra iainana mihitsy ny tsy fandriampahalemana ary tafiditra ho isan’ny faritra mena sy atahorana amin’ny asan-jiolahy ireo fokontany ireo amin’izao, raha ny tatitra voaray avy amin’ny mpitandro filaminana any an-toerana. Ny fanendahana sy ny vaky trano no tena malaza ao amin’ireo toerana ireo izay mampikolay ny olona, ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana. Fotoana izao tokony hijerena miaraka ny hamongorana ifotony ity resaka tsy fandriampahalemana ity. Asa avy hatrany no andrasana fa tsy vitan’ny resaka ambony latabatra ny raharaha toy izao satria tena efa maharary ny vahoaka ity asan-jiolahy manao tohivakana isan’andro ity.